लोकमानसिंह कार्कीको निशानामा अब को–को पर्दैछन्, यस्तो छ उनको टिप्पणी ! « Surya Khabar
लोकमानसिंह कार्कीको निशानामा अब को–को पर्दैछन्, यस्तो छ उनको टिप्पणी !
काठमाण्डौ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो पेसी बुझ्न पुगेका निलम्बित अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई विप्लव नेतृत्वको माओवादी निकट विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले कालोमोसो दलेका छन् । कालोमोसो दलेलगत्तै कार्कीले पूर्व तयारी गरेको एउटा धम्कीपूर्ण वक्तव्यपत्र तत्काल सार्वजनिक भएको छ । कार्कीको आफ्नो नीजि पेजमा प्रकाशित गरेको सो विज्ञप्तिमा उनले निकै गम्भीर धम्की समेत दिएको आभास हुन्छ । सर्वोच्चमा बिहीबार घटेको घट्ना र उनले सार्वजनिक गरेको सो वक्तव्यपछि नयाँ बहस समेत सुरु भएको छ । उनको सो धम्कीले क–कसलाई निशानामा पार्ने हो त्यो भने भोलीका दिनमा देखिएला नै तर उनले जारी गरेको बक्तव्यमा भने अधिकांश राजनीतिक नेताहरुलाई नांगेझार पारिदिने उद्घोष समेत भेटिन्छ । यस्तो छ, कार्कीले जारी गरेको बक्तव्य: